Abavelisi be-elektroniki abavelisi kunye nababoneleli - i-China IMISEBENZI YABASEBENZI
UKUTSHINTSHA IBHAKILE ECWELE
IBHAKILE YOKUSUSWA KOPHAZO
IBHAKITIKHI YOMTHANDI OSEPHANTSI
UMGANGATHO WENGQIQO & IBHOOM
YI-ROCK ARM & BOOM
I-BONOVO ibhakethi yesiko eyakhiwe ngokwakhiwa kwebhakethi yeLog Attachm ...
Inqanaba eliphezulu leBONOVO lokunxiba ukhuseleko ilogo yecompact compact
IBonovo Plate Compactor isetyenziselwa ukunyanzela ezinye iintlobo zomhlaba kunye negrabile yeeprojekthi zolwakhiwo ezifuna indawo ezinzileyo ezinokuthi zisebenze ngemveliso phantse naphi na apho i-excavator yakho okanye i-backhoe boom inokufikelela khona: kwimisele, ngapha nangapha kombhobho, okanye ngaphezulu kokufumba. kunye nenqwaba yeshiti. Ingasebenza ecaleni kweziseko, kujikeleze izithintelo, nkqu nakwimithambeka emqengqelezi okanye kwindawo erhabaxa apho izileyi eziqhelekileyo kunye nabanye oomatshini abanakho ukusebenza okanye kunokuba yingozi ukuzama. Ngapha koko, iipleyiti ze-Bonovo's compactors / abaqhubi banokugcina abasebenzi ubude boom ukusuka ekuxinaneni okanye isenzo sokuqhuba, ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bakude nengozi yokungena ngaphakathi okanye izixhobo zonxibelelwano.
I-BONOVO yokusebenza ixesha elide ivili lokuxinana kwabo bonke ubungakanani
Isondo lokudibana kweBonovo linceda ekuqinisekiseni ukuba ukuxinana komsele kwenziwa ngokukhawuleza nangokuphucukileyo kunomatshini wokungcangcazela. Bayakwazi ukwenza ngaphezulu ngaphandle kokunxiba kunye nokukrazula kumqhubi nakumatshini. Iivili zokuxinana kweBonovo ziyilelwe ukwenza kwaye zakhelwe ukuhlala ixesha elide.
Ifektri ye-BONOVO ithengisa ngokuthe ngqo kumanqanaba anamandla anokunxitywa kwesinyithi yevili egudileyo